ရဲမြင်ရင်ကို ကြောက်နေရတယ်လို့ ဆိုတဲ့ အန်တီ
February 1, 2020 Alinn Pya Comments Off on ရဲမြင်ရင်ကို ကြောက်နေရတယ်လို့ ဆိုတဲ့ အန်တီ
စခန်းမှူးနဲ့ ရဲအရာရှိများကို အရေးယူပေးရန် ဆန္ဒထုတ်ဖော် ရဲမြင်ရင်ကို ကြောက်နေရတယ်လို့ ဆို… ဖေဖော်ဝါရီ(၁) AlinnMyay(အလင်းမြေ) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ဆည်ခရိုင် မြစ်သားမြို့မှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က မြစ်သားမြို့မရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှူးနဲ့အတူ ရဲအရာရှိကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပေးရေး လူအင်အား ၁၀၀ ကျော်နဲ့တောင်းဆို ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ မြစ်သားမြို့မရဲစခန်းကို အမှုတိုင်တန်းပေမဲ့ တိုင်ကြားခံရသူ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ရဲစခန်းအတွင်းမှာ ခြိမ်းခြောက်နိုင်စေရန် ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်ခါ်ဆိုပေးတဲ့ စခန်းမှူးနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သူ ရဲအရာရှိကို အရေးယူပေးနိုင်ရန်တောင်းဆို ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာဖြစ်တယ် […]
ကပ်ဘေးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဇွဲကပင်တောင် လက်ရှိအခြေနေမီးလောင်နေပါကြောင်း
February 1, 2020 Alinn Pya Comments Off on ကပ်ဘေးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဇွဲကပင်တောင် လက်ရှိအခြေနေမီးလောင်နေပါကြောင်း
ကပ်ဘေးရဲ့ ဒုတိယအဆင့် ငှက်တွေ ကောင်းကင်မှာပျံနေရင်းနဲ့မျက်လုံးတွေလည်ပင်းတွေကနေ သွေးတွေထွက်ပြီးပြုတ်ကျကုန်တယ်…. နှံကောင်တွေ အများကြီး ယာခင်းတွေဆီကို ဆင်းလာပြီးဖျက်စီးတယ် ….ငှက်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက် လူတွေနဲ ့အနီးဆုံးကိုရောက်လာတယ်…. အဲဒါတွေက ကပ်ဘေးရဲ့ဒုတိယအဆင့်ပါ…. ပထမအဆင့်က ရောဂါပိုးကူးစက်တယ်….. ကပ်ဘေးဆိုတာ တဆင့်ပြီးတဆင့်လာတာပါ….. တတိယ အဆင့်က ခလေးတွေနဲ့ မိန်းမတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်နာမကျန်းဖြစ်မယ် ….. နာနာဘာဝ ပူးတာကပ်တာတွေ ဖြစ်မယ် ….သေတဲ့သူတွေကို ဘီလူးတွေဘုတ်ပြိတ္တာတွေက ညဘက်စားမယ်….. ခွေးအူတာတွေ ဖြစ်မယ် ….အရိပ်မဲမဲကြီးတွေ နေရာအနှံ […]
အလှူ ညတရားပွဲမှာ ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့
February 1, 2020 Alinn Pya Comments Off on အလှူ ညတရားပွဲမှာ ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့
အလှူမှာ ညတရားပွဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်း မဏ္ဍပ်ရှေ့ထွက်ထိုင်နေမိချိန်လေး …. ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကျွန်တော့်က ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့အနားသွားမှပဲ ဆော့နေကြတာမဟုတ်ဘူးဗျ…. ဘုန်းကြီးကားကို သူတို့အကျီ င်္လေးနဲ့ ဖုန်တွေသုတ်ပေးနေတာပဲ။ ခုအချိန်မှာ လူကြီးတွေဘယ်လိုစိတ်ဓါတ်တွေပဲရှိနေကြပါစေ ….. နောင်တစ်ချိန်လူကြီးဖြစ်လာကြမဲ့ ကျွန်တော့်တို့ရွာက ကလေးလေးတွေရဲ့ ခုလိုစိတ်ဓါတ်လေးတွေတွေ့ရ‌ပြန်တော့လဲ ကြည်နှူးမိရပြန်ပါတယ်။ ကလေးလေးတွေရဲ့ စိတ်ထားလေးတွေ ခုလိုလေးဖြစ်ပေါ်လာရတာကလဲ ကျွန်တော်တို့ရွာလေးမှာရှိတဲ့ဓမ္မစကူးလ်သင်တန်းလေးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးပါနိုင်ပါလားလို့စဉ်းစားမိရင်း………။ Kyaw Win Tun အလႉ ညတရားပြဲမွာ ကေလးေလးေတြ […]
သင်ခန်းစာယူနိုင်ပါစေ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံကနေ နေ့ချင်းညချင်းလူတွေ လက်မခံတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီ
February 1, 2020 Alinn Pya Comments Off on သင်ခန်းစာယူနိုင်ပါစေ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံကနေ နေ့ချင်းညချင်းလူတွေ လက်မခံတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီ
သင်ခန်းစာယူနိုင်ပါစေ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံကနေ နေ့ချင်းညချင်းလူတွေ လက်မခံတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီ.. အင်အားကြီးမားတဲ့စစ်တပ်ကြီးထက်ဆေးရုံကြီးတွေ၊ အစွမ်းထက်ဆေးဝါးတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ လိုပြီဆိုတာ သိပြီမဟုတ်လားငြ့်မားလှတဲ့ တရုတ်ရှယ်ယာတွေလည်းကျဆင်းကုန်ပြီကုန်ပစ္စည်းသန်းပေါင်များစွာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့စက်ရုံတွေလည်း ပိတ်ထားရပြီ တရုတ်အလုပ်သမားတွေလည်း အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီ လေကြောင်းလိုင်းတွေလည်း ဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီ အင်အားကြီးစစ်တပ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေ..ချမ်းသာသူတွေလို့ မော်ကြွားခဲ့သမျှ…ခုဆို ခေါင်းမဖော်ရဲတော့ဘူး သူများနိုင်ငံမှာလဲ နေလို့မရကိုယ့်နိုင်ငံမှာလည်း မနေရဲ..ဖြစ်ကြပြီ.. စားချင်တာစား..နေချင်သလိုလုပ်ချင်တာလုပ်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လား..ခု..အဲဒီအကျိုးဆက် ပြန်ခံရပြီ ဗိုလ်ကျခဲ့သမျှ..ကူညီမယ့်သူမရှိ..ဖြစ်သမျှခါးစည်းခံနေရတာစိတ်တော့ မကောင်းပါဘူး ငါတို့ဆီက တွင်းထွက်တွေယူတယ်..ငါတို့ဆီက အလုပ်သမားတွေကို ဗိုလ်ကျတယ်..ငါတို့အမျိုးသမီးတွေကို ယူတယ်.. ငါတို့အသက်တွေကိုတော့ ချမ်းသာပေးပါ ငါတို့ နိုင်ငံက […]
အိမ်မွေးတိရစ်ဆာန်များမှာလည်း ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ရှိနိုင်ဟု ပညာရှင်များ သတိပေးလိုက်ပြီနော်
February 1, 2020 Alinn Pya Comments Off on အိမ်မွေးတိရစ်ဆာန်များမှာလည်း ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ရှိနိုင်ဟု ပညာရှင်များ သတိပေးလိုက်ပြီနော်
ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အခြားတိရစ်ဆာန်တွေမှာလည်း ရှိနေနိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အိမ်မွေးတိရစ်ဆာန်လေးတွေမှာ ရှိနေတယ်ဆိုပါက လူတွေကိုလည်း ကူးစက်ခံရနိုင်တယ်လို့ သတိပေးခဲ့တာပါ။ တရုတ်ပြည်တွင်း ကျန်းမာရေးကော်မရှင်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပ ရောဂါရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၊ ဒေါက်တာ Li Lanjuan က ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လူတွေနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တာမဟုတ် အသက်ရှူကြတဲ့ တစ်ခြားနို့တိုက်သတ္တဝါတွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူတွေနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ခွေးနဲ့ကြောင်တို့မှာ ဒီရောဂါတွေ ကပ်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ Li […]